Xajiinta, Cuncunka (Allergies)
Author Topic: Xajiinta, Cuncunka (Allergies) (Read 76509 times)
« on: December 21, 2007, 01:31:20 AM »
Xajiintu ama Cuncuku waxay dhacdaa marka jirku uu jawaab ka celiyo shay. Tani waxaa laga yaabaa in ay keento dhibaato yar ilaa mid daran. Waxaa jira noocyo xajiin ah oo kala duwan. Kuwa ugu badan waxay kala yihiin:
Xajiin hawada ka dhalata sida faxalka, caaryada, dufta xayawaanka ama boorka.
Xajiinta taabashada sida birta, dheeha ama kiimikooyinka.
Xajiinta cuntada sida ukunta, looska, caanaha, digaaga ama kaluunka shellfish.
Xajiinta daawooyinka laga qaado.
Nooc kasta oo xajiin ah wuxuu keeni karaa finiinicyo ama jirka oo casaada iyo dhibaato neefsashada ah.
Xajiinta ama allerjiga wuxuu ku dhici karaa dad aad u badan laakiin waxaa jira dad xasaasiyadoodu sarayso oo afka qalaad lagu yiraahdo "Atopy" oo macnaheedu tahay qofka hidda socodkiisa ama dhaxalkiisa ayuu ku jiraa inuu xajiimoodo waxaana dadkaas ku badan cudurro badan oo xajiinta laga qaado sida: Neefta ama Xiiqda, Sanboorka, Cuncunka maqaarka ama Eczema iyo kuwa kalaba, Haddii aad cudurradaas mid ka mid ah aad qabto kuwa kale way kuu sahlan yihiin inay kugu dhacaan.
Cun-cun leh, sanka oo dareeraya ama cabbur.
Cadaadis sanka fuula.
Indhaha oo cun-cun leh, guduuta, barara, hura oo biyo ka yimaadaan.
Cune cun-cun ama qufac.
Dheecaan fara badan.
Dhadhanka oo qofka ku yaraada ama wax urinta.
Lalabbo ama matagid Calool xanuun ama casiraad.
Barar ku yimaada afka dhinacyadiisa ama wax liqidda oo dhib noqota.
Cun-cunka maqaarka ama indhaha.
Bararidda faruuryaha, carrabka ama wejiga.
Suuxid, caajis ama isku dhex yaac.
Wadne garaac deg-deg ah.
Lalabbo ama matagid.
Calool xanuun ama casiraad.
Isbitaalka aad haddii aad isku aragto:
Saameyn liddi ah oo lama filaan ah oo daawada kaaga timid.
Calaamadaha ka sii dara ama kaa celiya in aad hawlahaagii caadiga ahaa qabsatid.
Qandho ka sarraysa 101 darajo oo F ah ama 38 darajo oo C ah.
Akhriso qoraallo ku saabsan qaababka aad u dareemi kartid Allarjiga iyo sida loola tacaalo:
1- Allerjiga Halista ah: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=2223.0
2- Xajiinta Gacmaha: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=1091.0
3- Neefta / Xiiqda: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=351.0
4- Sanboor: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=5658.0
Views: 40058 November 17, 2009, 07:36:08 PM
Views: 14169 July 08, 2015, 04:39:13 PM
Started by Dalmar881Board Qaybta Su'aalaha
Views: 7195 December 12, 2008, 11:55:52 AM
Views: 42023 December 25, 2017, 10:38:11 AM
Views: 27506 February 18, 2011, 09:01:35 PM